Ungazifihla kanjani izithombe noma amafayela kudivayisi yakho ye-Android | Izindaba zamagajethi
Ungazifihla kanjani izithombe noma amafayela kudivayisi yakho ye-Android
Amadivayisi eselula muva nje abe ngumlingani wokuhamba obalulekile futhi kwesinye isikhathi obalulekile wabasebenzisi abaningi. Kuzo sigcina inani elikhulu lolwazi phakathi kwalo, ngokwesibonelo, ezimweni eziningi, inani elikhulu lezithombe noma inani elingenakubalwa lamafayela womsebenzi wethu noma usuku lwethu lwanamuhla oluvelele.
Ezinye zalezi zithombe noma amafayela zingabonwa abanye abasebenzisi abangafinyelela i-smartphone yethu ngaphandle kwenkinga, kepha ezinye akufanele zibonwe yinoma ngubani ngaphandle kwethu. Ukuze ungashiyi lolo lwazi olubalulekile kuwe, futhi ngaphezu kwakho konke okuyimfihlo, ngokubheka noma ngubani, kule ndatshana sizokufundisa ungazifihla kanjani izithombe noma amafayela kudivayisi yakho ye-Android, ngendlela elula futhi ngaphandle kwezinkinga eziningi kakhulu.
Inketho yokuqala okufanele siyicabangele ukugcina imininingwane yethu namafayela kude nokuhlola amehlo, kungaba dala amaphrofayli amaningana kudivayisi yethu yeselula, uma kungenzeka umsebenzisi ongaphezu koyedwa abe nokufinyelela ku-terminal. Ngenxa yalolu khetho oluvele okokuqala ku-Android 5.0 Lollipop ikuvumela ukuthi wakhe iphrofayili yomsebenzisi ngamunye wabantu abasebenzisa le divayisi.
Ngeshwa lokhu kunzima kakhulu futhi ezikhathini eziningi esifuna ukukwenza ukufihla amafayela noma izithombe ezinhlebo ezingenzeka, hhayi kwabanye abasebenzisi. Ungalenzi iphutha, bambalwa kakhulu abasebenzisi ababelana nabanye ngedivayisi yabo ephathekayo noma ithebhulethi kanti lezo okwabelwana ngazo kuvamise ukuba yizindawo zokusebenzela ezigcina izinto ezincane noma ezingenazo nhlobo okumele zivikelwe ekubukeni kwabanye.
1 Uwafihla kanjani amafayela kuselula ngohlelo lokusebenza
1.1 Ifayela Fihla Isazi
1.3 Ezinye izindlela
Uwafihla kanjani amafayela kuselula ngohlelo lokusebenza
Ngaphandle kokuthi enye indlela yokufihla amafayela noma izithombe ku-Android ngokwakha iphrofayili yomsebenzisi ngamunye osebenzisa i-smartphone, ngaphandle kokungabaza akuyona inketho engcono kakhulu esingaphendukela kuyo. Ngokombono wethu uma ufuna ukugcina noma yiliphi ifayela liphephile ekuhloleni amehlo, kufanele sebenzisa noma yiziphi izinhlelo zokusebenza esizokukhombisa zona ngezansi nje.
Ifayela Fihla Isazi
Inketho yokuqala esizokukhombisa yona, nentandokazi yethu, ukuthi Ifayela Fihla Isazi, umhloli wefayela ngokuzenzakalela okwazi ukufihla hhayi amafayela kuphela kodwa namafolda wonke, okuthile kwesinye isikhathi okungasiza kakhulu. Ngaphezu kwalokho, enye yezinketho zayo ezinhle ukuthi ikuvumela ukuthi unikeze ukubonakala kumafayili noma amafolda nganoma yisiphi isikhathi, into eyinkimbinkimbi kakhulu kwezinye izinhlelo zalolu hlobo.
Okokugcina kuyajabulisa isivumela ukuthi sivikele izinhlelo zokusebenza nge-password, ukuze wonke amafayela ethu aphume emehlweni ababukeli. Futhi uhlelo lokusebenza lungalandwa mahhala esitolo esisemthethweni se-Google noma ku-Google Play, ngakho-ke angazi ukuthi ulindeni ukulilanda njengamanje bese uqala ukulisebenzisa futhi ulisebenzise ngokunenzuzo. Ukuvikela womabili amafayela akho kanye nezicelo zakho.
Umthuthukisi: Fihla Izinhlelo Zokusebenza
Uma okufunayo ukuvikela ezinye izithombe kuhlelo oluthile, okuvame ukuthi kube yilokho esifuna ukukufihla emehlweni abantu abathandayo, isicelo esifanele salokhu I-AppLock, iyiphi inketho yesibili ezosivumela futhi ukuthi sivikele izinhlelo zokusebenza ekusetshenzisweni.
Lolu hlelo lokusebenza lunohlobo lwamahhala, esingalulanda sonke, kepha futhi singakhulisa izinketho zalo nemisebenzi ngokuba ngabasebenzisi be-premium ngemali encane, noma ngabe ufuna ukugcina izithombe zakho zifihliwe futhi uvimbele olunye uhlelo lokusebenza ngesisekelo version uzoba nokuningi ngokwanele.
I-Google Play igcwele izinketho ezahlukahlukene zokuvikela amafayela akho noma izithombe, futhi ikhawulele nokufinyelela kuzinhlelo zokusebenza, kepha sesivele sibuyekeze izinketho eziyinhloko kule ndatshana, noma ngabe kungasiphi isizathu kungaba izinhlelo esivele sikubonile wena ungaqiniseki, sizokunikeza ezinye izindlela.
Uma ufuna ukufihla izithombe noma amavidiyo, ungakhetha le nketho;
Ide Fihla izithombe, amavidiyo
Umthuthukisi: IKHABULA LAB
Uma okudingayo kungukuthi vikela amafolda noma amafayela ekubukeni amehlo Kusuka kwabanye abasebenzisi noma kunoma imuphi umsebenzisi angafinyelela kudivayisi yakho yeselula noma ithebhulethi, ungakhetha lolu hlelo lokusebenza oluthandekayo;
Umthuthukisi: INewSoftwares LLC
Yize bonke abasebenzisi benedivayisi yethu ephathekayo futhi kuyaqabukela ukuthi singabelana ngayo nomunye umuntu noma sikuboleke, akubalulekile ukuthi kufakwe isicelo salolu hlobo. Futhi ngukuthi sonke ngokuvamile sinesithombe okungafanele sibonwe yiwo wonke umuntu. Ukuba nazo zivikelwe kungabaluleka kakhulu hhayi kuphela uma umngane noma isihlobo sithatha idivayisi yethu ukubheka noma yini, kepha uma, ngokwesibonelo, i-terminal ibiwe, ukuze bangakwazi ukufinyelela kalula kakhulu kulokho okuqukethwe.
Ukuvinjelwa kohlelo lokusebenza kungabaluleka impela, futhi yize izicelo eziningi sezivele zisicela igama lomsebenzisi nephasiwedi ukufinyelela, kukhona ezinye esivumela ukuthi sibonwe ngaso sonke isikhathi, ezingahlala zivulekile ngaso sonke isikhathi kunoma ngubani ongathatha i-smartphone yethu, yebo, inqobo nje uma yazi iphethini yokuvula noma i-PIN yokufinyelela yokugcina.
Kwesinye isikhathi kuba ubuvila ukwenza imisebenzi edingekayo ukuvikela idivayisi yethu ephathekayo ngohlelo lokusebenza lwe-Android, kepha uma ufuna ukugwema izinkinga ngokuzayo, vikela izithombe zakho ezibekeke engcupheni, kanye namafayela abalulekile kuwe ngisho nakwezinye izinhlelo zokusebenza ungafaka ukulungisa okuthile.
Ingabe ungomunye wabasebenzisi abaningi abasebenzisa izinhlelo zokusebenza ukufihla izithombe noma amafayela abo?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kwalokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikuwo, futhi usitshele nokuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza ozisebenzisayo kuwe ukuze sonke sikwazi ukuzihlola futhi sibone ukuthi kukhona yini kuzo ifakwe kule ndatshana ukuze ikwenze kuphelele futhi kunembe ngokwengeziwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Android » Ungazifihla kanjani izithombe noma amafayela kudivayisi yakho ye-Android
UMovistar uqeda uphawu lweYomvi futhi uqhubeka nokwenza homogenization
I-Huawei G9 Plus, ibanga elisha maphakathi ne-premium design